July 9, 2020 - Alinnpya
July 9, 2020 AlinnPya Comments Off on ကလေးကလည်း အမေကိုမျှော်နေပြီး အမြဲငိုနေလို့ပါအမြန်ဆုံးရှာတွေ့အောင်တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးကြပါ
ကလေးကလည်း အမေကိုမျှော်နေပြီး အမြဲငိုနေလို့ပါအမြန်ဆုံးရှာတွေ့အောင် တတ်နိုင်သလောက်ကူညီပေးကြပါ နေပြည်တော် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် နဝဒေးရပ်ကွက်နေ မဆွေဆွေစိုးငြိမ်းအေး (ခေါ် ) မဆွေဇင်ယု အသက် 28 နှစ်သည် နေအိမ်မှ 8.7.2020ရက်နေ့ မနက်9နာရီတွင် ကျည်တောင်ကန်ဈေးသို့သွားရာမှ ပြန်ရောက်မလာပါသဖြင့် တွေ့ရှိပါက အကြောင်းကြားပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။ မိဘများစိတ်ပူနေပြီး ကလေးကလည်း အမေကိုမျှော်နေပြီး အမြဲငိုနေလို့ပါ ရဲစခန်းမှာလည်း လူပျောက်တိုင်ကြားထားပါသဖြင့်လက်ခံထားသူရှိပါက ဆက်သွယ်ပေးပါရန်မေတ္တရပ်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။ လက်ခံထားပြီးမဆက်သွယ်ပါက ဥပဒေရအရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးပါရစေရှင် 09 693 400 931 […]
ပေါင်မြို့နယ်ကျွဲခြံကျေးရွာမှာ ဖွားဘက်တော်တစ်စုံလုံးအား ဘရိတ်ဒါးဖြင့်ကိုယ်တိုင် ဖြတ်တောက်ထားမှုဖြစ်ပွား
July 9, 2020 AlinnPya Comments Off on ပေါင်မြို့နယ်ကျွဲခြံကျေးရွာမှာ ဖွားဘက်တော်တစ်စုံလုံးအား ဘရိတ်ဒါးဖြင့်ကိုယ်တိုင် ဖြတ်တောက်ထားမှုဖြစ်ပွား
ပေါင်မြို့နယ်ကျွဲခြံကျေးရွာမှာ ဖွားဘက်တော်တစ်စုံလုံးအား ဘရိတ်ဒါးဖြင့်ကိုယ်တိုင် ဖြတ်တောက်ထားမှုဖြစ်ပွား ပေါင် ဇူလိုင် ၈ အရက်သောက်ထားသူအမျိုးသားတစ်ဦးမှ မိမိငယ်ပါတစ်စုံလုံး (ကြက်ဥနှစ်လုံး နှင့် ငှက်ပျောသီးအပါအဝင်)အား ဘရိတ်ဒါးဖြင့်လှီးဖြတ်ပြီး ၎င်း၏အနီး သွေးအိုင်ထဲတွင် ပုံထားသည်ကို ပတ်ဝန်းကျင်မှတွေ့ရှိသဖြင့်လူနာတင်ကားဖြင့် ဆေး ရုံသို့ပို့ဆောင်ထားဟုသိရသည်။ ဇှုလိုင် ၆ ရက် ညနေ ၅ နာရီခန့် အချိန်က ပေါင်မြို့နယ်ကျွဲခြံကျေးရွာ ကရင်ချောင်ပိုင်းရှိ ဦးသိန်းလှိုင်၏ ဥယျာဉ်ခြံစောင့် လုပ်သား ကျော်ဦး (ဘ)ဦးတင်အောင် အသက်(၄၇) နှစ်ကျော်ခန့်သည် […]
July 9, 2020 AlinnPya Comments Off on မိသားစုဝင်များအားဝိဉာဉ်မှအိပ်မက်ပေးခဲ့တဲ့ရုပ်အလောင်း
မိသားစုဝင်များအားဝိဉာဉ်မှအိပ်မက်ပေးခဲ့တဲ့ရုပ်အလောင်း ပင်လယ်ပြင်တွင်ငါးဖမ်းထွက်ရင်းပျောက်ဆုံးနေသော ရေလုပ်သားမှ သူ့အားလိုက်မရှာကြရန်နှင့် အချိန်တန်ရင်သူ၏အလောင်းအား အလ်ိုလိုမြင်တွေ့ရမည်ဟု မိသားစုဝင်များကိုအိပ်မက်ပေးပြီးနောက် အလောင်းအားရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ ဇူလိုင် ၉ ရက် ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ” ပ ရကျွပ်ခီရိခမ်း ” ခရိုင် ” ဆမ်လွိုက်ယော့ဒ် မြို့နယ်တွင် ပယ်လယ်ထဲသို့စက်လှေဖြင့်တစ်ဦးတည်းငါးဖမ်းထွက်သွာရင်း စက်လှေမှာ ” ရေမိုင် ၆ မိုင်ကွာအခန့်ရှိ နုမ်းဆောင် ” မယ်တော်ကျွန်းအနီးတွင် လူမပါဘဲ စက်နိုးလျှက်မျောနေသည်ကို […]
ဒီနှစ် ကျောင်းထားမယ်ဆိုတဲ့ မိဘများအတွက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
July 9, 2020 AlinnPya Comments Off on ဒီနှစ် ကျောင်းထားမယ်ဆိုတဲ့ မိဘများအတွက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ် အတွက် မိဘ ၊ အုပ်ထိန်းသူနှင့် ပြည်သူများ သို့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန မှ မေတ္တာရပ်ခံချက် ၁၆ ချက်ကို ( ဇူလိုင် ၈ ရက် ) က ကြေညာ လိုက် သည် ။ ကျောင်းသား ဦးရေ တိုးတက် များပြားလာခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကျောင်းအပ်နှံနှုန်း မြင့်မားလာခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း ၊ ထပ်ကျော့ကျောင်း အပ်နှံခြင်းကြောင့် […]
July 9, 2020 AlinnPya Comments Off on အသက်မပြည့်သေးသူကိုခိုးယူပေါင်းသင်းခဲ့သူ
အသက်မပြည့်သေးသူကိုခိုးယူပေါင်းသင်းခဲ့သူကိုမိခင်ဖြစ်သူကအမုှဖွင့်ထား အမှုဖြစ်စဉ်မှာရ.၅.၂၀၂ဝရက်ည၁၁နာရီအချိန်တွင်ဒေါ်…. (၅၆)နှစ်၊လယ်လုပ်သူသည်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ကျောက်တခါးမြို့မရဲစခန်းအပိုင်စခန်းအနောက်တောင်(၆)မိုင်ခန့်အကွာရှိ……….ကျေးရွာအုပ်စု၊………………..းကျေးရွာရှိ နေအိမ်တွင်သမီးဖြစ်သူမ……(၁၆နှစ်၃လ)၊မှီခိုသူနှင့်အတူနအိမ်တွင်အိပ်ယာဝင်ခဲ့ပြီးနောက်နေ့နံနက်(၅)နာရီအချိန်အိပ်ယာမှနိုးလာချိန်တွင်သမီးဖြစ်သူကိုမတွေ့ရှိရပဲပျောက်ဆုံးနေသဖြင့်ဥယာဉ်တော်ကျေးရွာ၊ကျွဲကန်အုပ်စု၊အုတ်တွင်းမြို့နယ်နေသမီးဖြစ်သူမ……(၃၇)နှစ်၊ကျဘမ်းလုပ်သူအားဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်၍မ……(၁၆နှစ်၃လ)ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းပြောပြီးကူညီစုံစမ်းပေးပါရန်ပောကြားခဲ့ကြောင်း၊ထိုသို့ဆက်သွယ်ပြောဆိုပြီးတရားလိုဒေါ်…..( ၅၆)နှစ် သမီးမ….(၃၇)နှစ်နှင့်၎င်း၏ယောက်ျားဖြစ်သူ…….၊လယ်လုပ်၊ကျွဲကန်အုပ်စု၊ဥယာဉ်တော်ကျေးရွာအုတ်တွင်းမြို့နယ်နေသူတို့နှင့်အတူလိုက်လံရှာဖွေရာမတွေ့ရှိဘဲနေခဲ့ရာမှ ၅.၇.၂၀၂ဝရက်ညနေ၆နာရီအချိန်ဒေါ်…….သည်နေအိမ်၌ရှိနေစဉ်၎င်း၏သမက်ဖြစ်သူတစ်ရွာတည်းနေ……..ကဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုလာခဲ့ပြီးကျော်စိုး(ခ)ဆာဝန်ဆံကား (၂၈)နှစ်၊ကျဘမ်း၊ကျွဲကန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ဥယာဉ်တော်ကျေးရွာ၊အုတ်တွင်းမြို့နေသူမှခယ်မဖြစ်သူမ……(၁၆နှစ်၃လ)အား၎င်း၏နေအိမ်တွင်ရောက်ရှိပေါင်းသင်းနေထိုင်နေကြောင်းပြောပြသိရှိရသဖြင့်၆.၇.၂၀၂ဝရက်မွန်းလွဲ၃နာရီအချိန်ဒေါ်……ကသမက်ဖြစ်သူကို……..၊သမီးမ……၃ရနှစ်တို့နှင့်အတူကျော်စိုးခဆာဝန်ဆံကားနေအိမ်သို့သွားရောက်၍သမီးဖြစ်သူမ…..အားသွားရောက်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြောင်းနှင့်ဒေါ်……မှ၎င်း၏အတူနေအသက်မပြည့်သေးပဲမိဘအုပ်ထိမ်းမုှမကင်းသေးသူကို၎င်း၏ခွင့်ပြုချက်မရရှိ ပဲခိုးယူပေါင်းသင်းသူကျော်စိုး(ခ)ဆာဝန်ဆံကားကိုဥပဒေအရအရေးယူပေးပါရန်တရားလိုပြုလုပ်တိုင်တန်းခဲ့ရာရ.၇.၂၀၂ဝရက်ည၁ဝနာရီ၂ဝမိနစ်အချိန်ကျောက်တခါးရဲစခန်း(ပ)၂၁၆/၂၀၂၀ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၆၃/၃၆၆ အရ အမုှရေးဖွင့်ကာအမုှစစ်ဒုရဲအုပ်ဇင်သူအောင်ကတရားလိုနှင့်သက်သေများမြေပုံကြမ်းရေးဆွဲခြင်း၊မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း၊သက်သေခံပစ္စည်းသိမ်းဆည်းခြင်း၊ကျူးလွန်သူအားအမှုဖြင့်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရန်စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်။ ကိုသက်(ကျောက်တခါး)S .H ရုှထောင့်မုှခင်းနှင့်သတင်းဂျာနယ်
July 9, 2020 AlinnPya Comments Off on အသက် ၁၁နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦး သားမယားပြုကျင့်ခံရ
အသက် ၁၁နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦး သားမယားပြုကျင့်ခံရ ခင်ပွန်း ကွယ်ရာမှာ (၁၇)နှစ်အရွယ် ကောင်လေးနဲ့ အကာအကွယ်မပါဘဲ ချစ်တင်းနှောခဲ့တဲ့ ဆရာမရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ လှိုင်သာယာ(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ် ၊ ညောင်ကျေးရွာအုပ်စု ၅၅၅ သဲကွင်းရှိ ကျူးနေအိမ်နေ အသက် ၁၁နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး သားမယား ပြုကျင့်ခံရမှု ဇူလိုင်လ ၇ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားကြောင်း သိရသည်။ “ကျွန်မ ကုန်စိမ်းရောင်းနေစဉ် ညောင်ကျေးရွာအုပ်စု ၅၅၅ သဲကွင်း၊ စံပယ် (၁)လမ်းအတွင်းရှိ ဆောက်လက်စ […]